Portal:Aasiya/Muuqaalo - Wikipedia
Portal:Aasiya/Maqaal xul ah/1
Mongoliya (Afka Mangoliyaan: Монгол Улс/Mongol Uls) waa dawlad kutaala bariga badhtamaha aasiya waxa ay u dhaxaysaa wadamada Ruush iyo Shiinaha waxaana u caasimada magaalada Ulan Bator waxa ay kujirataa meel xidhan mana laha wax dakada amaba meelna bad ugama dhawa.mangoliya waxa gumaysanaysay waedanka shiinaha intii u dhaxaysay 1691 ilaa 1911 kadib waxa gacanta kudhigay wadankii Midowga Sofiyet1919 ilaa 1929 kadib waxa ay madaxbanaani qaadatay sanadii 1929 laakiin waxa ay kuxidhnayd midawgii saofiyet ilaa intii uu kadhacay 1990.mangoliya waxa lagaga hadlaa luqada rasmiga ha ee wadanka oo looyaqaano Lahalah luqada ugu isticmaalka badani waa luqada ruushka. masaafada wadanka mangooliya waxa aygaadhaysaa 1,565,000 kiiloo mitir oo isskuwareeg ah waana wadan aad uwayn. laakiin dadka kunool mangooliya marka looeegoo wadankooda oo aad iyo aad uwayn iyagu waxa ay gaadhayaan sadax milyan oo qof waana dad aad uyar.
Portal:Aasiya/Maqaal xul ah/2
Bariga Dhexe (Af Ingiriis : Middle East; Af carabi: الشرق الأوسط) waa mandaqad Juquraafiyeed Kakooban Wadamada Galbeedka Aasiya iyo Waqooyiga Afrika. Mandaqada Bariga Dhexe waxa ay Hadhaysaa badaha Badacas Gacanka Carabta Bada Dhexe iyo Bada Carbeed. Magacani waxa uu tilaamayaa xadaaradaha iyo taariikhda mandaqadan.magacan waxa labixiyaay xiligii ay nimankii juquraafaystayaasha ahaa caalamka u qaybiyeen mandaqado.taasina waxa ay ahayd xili aad u fog. Bariga Dhexe waa mid kamida meelaha caalmka ugu Rabshadaha badan. Bariga Dhexe waxaa la isku dhahaa ama ee u badantahay dhulka ee carabta degto, waxeena ku taalaa Koonfurta Galbeed ee qaarada Aasiya iyo Woqooyiga qaarada Afrika. Wadamada ee bariga dhexe ka koobantahay waxaa ka mid ah.
Portal:Aasiya/Maqaal xul ah/3
Portal:Aasiya/Maqaal xul ah/4
Burj Khalifa (Af carabi: برج خليفة, turjumaad: "Dabaqa Khalifa"; loogu dhawaaqo English /ɜrdʒ kəˈliːfə/), sidoo kale loo yaqaano Burj Dubai waa dabaqa ugu dheer aduunka kaasi oo ku yaala magaalada Dubay, Imaaraatka Carabta. Burj Khalifa waa dabaqa aduunka uugu dheer, oo dhirirkiisu yahay 828 meter . Waxoona ku yaalaa magaalada Dubay ee dalka Imaaraatka Carabta. Burj khalifa waxaa la bilaabay, 21 sebteembar 2004. waxaana la dhameeyay 2009 oona la furay 4 Janaayo 2010. Dabaqaan dheer waxaa ku dhaxyaalo Hotelal iyo guryo.
Portal:Aasiya/Maqaal xul ah/5
Hindiya ama Jamhuuriyadda Hindiya waa wadan ku yaala Aasiya waana wadanka Aduunka ugu dadka tirada badan marka laga reebo Shiinaha. Wadanka waxoo xuduud la leeyahay, wadamada Bakistaan, Shiinaha, Nebal, Butaan, Bangladesh iyo Burma. Dhinaca xeebaha neh waxoo xuduud la leeyahay wadamada Siri Laanka, Jasiirada Maldiif, iyo Indonesia. Magaalo madaxda wadanka waa New Delhi. Wadanka Hindiya waxaa degan dad gaaraayo in ka badan 1 Biliyan oo qof, waxaana lagu hadlaa luqado gaareeso in kabadan 100af. Hindiya waa wadanka afaraad oo ugu ganacsiga badan aduunka. Hindiya waxee leedahay Taariikh aad u dheer. wadanka waxuu jiri jiray kumanaan sano kahor. Gumeestihii ingriiska ayaa soo gumeestay Hindiya iyo pakistaan, markooda hore waxee ahaayeen hal wadan. waxeenaxornimada qateen1947kii, waa markii ee Bakistaan iyo Bangladesh ee ka go'day Hindiya.pakistan waxee hindiya ooga go'day kala duwanaashaha diinta. Hindiya waa wadan laga caabudo hindu, pakistaana waa wadan muslimiinta ku badanyihiin labada qeebood dagaalo badan ayaa dhexmaray sanado badan. Kadib sanadka marka uu ahaa 1948kii ilaa 49kii, Hindiya iyo pakistaan waxaa ka dhex jiray dagaalo dagaaladaas oo sabab u eheed kala qeebintii Gobolka Kashmir. Luqada ugu ween oo Hindiya looga hadlo waa af hindi iyo luuqada ingriiska Wadanka Hindiya waxaa laga caabudaa Lo'da
Portal:Aasiya/Maqaal xul ah/6
Shiinaha (中华人民共和国 / 中華人民共和國) waa wadanka shiinaha waa wadanka ugu ween bariga Aasiya, waana wadanka sadaxaad oo ugu ween aduunka oona ugu dadka tirada badan. wadanka waxaa degan, dad gaaraayo 1.3 biliyan oo qof, waa halkiiba shan oo shacabka aduunka oo dhan aa degan. magaalo madaxda wadanka waa Beijing.wadanka Shiinaha waxa kamida sida gobolada Hong Kong Makaw. Wadanka shiinuhu waxa uu ka koobanyahay dhul gaadhaya 9.6 malyan oo labajibaaran waxaanuu noqonayaa wadanka sadexaad ee caalmka uguwayn.wadanka shiinuhu waxa uu kakoobanyahay dhul saxare ah iyo dhul kayn ah. xadaaradahii hore ee shiinuhu waa mid kamida xadaaradaha caalmka ugu qadiimsan.sikale haddii aan u dhigno wadanka shiinuhu waxa uu leeyahay taariikh aad iyo aad u dheer.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Aasiya/Muuqaalo&oldid=165248"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Jannaayo 2017, marka ee eheed 12:12.